Home Wararka MW Uhuru iyo Antony Blinken oo kawada hadlaya arimaha Soomaaliya
MW Uhuru iyo Antony Blinken oo kawada hadlaya arimaha Soomaaliya
Xiriirka u dhaxeeya labada dal ee Kenya iyo Maraykanka ayaa ah mid isbadal weyn ku yimid. Dowlada Maraykanka ayaa ka dhigatay dalka Kenya saaxiibkeeda gaarka ee dalalka Africa. dhowr asbuuc ka hor, Madaxweyne dalka Maraykanka ayaa aqalka cad ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Kenya iyada oo labada dhinac ay kasada hadleen arimaha ka jira geeska Afrika, gaar ahaan dalka Soomaaliya.
Iyada oo la sii adkeynayo xiriirka labada dhinaca, ayaa Magaalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya waxaa lagu wadaa in 15-ka bishaan November oo ku beegan Isniinta soo socota uu socdaal ku tego Xoghayaha Arrimaha Dibadda dowladda Maraykanka Antony J. Blinken, sida uu qorshahu yahay.
Ujeedka Xoghaye Antony J. Blinken ee Kenya ayaa waxaa uu yahay sidii uu kulami lahaa Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo Xoghayihiisa arrimaha dibadda, Raychelle Omamo, iyagoona ka wada hadli doono Arrimo kala duwan iyo kuwo qorsheysan.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Maraykanka iyo Madaxweyne Kenyatta ayaa kulankooda uga wada xaajoon doona xoojinta xiriirka iyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee uu Maraykanku la leeyahay Kenya.
Sidoo kale labada Mas’uul ayaa markii ay kulmaan ka wada Arrinsan doona wax ka qabashada arrimaha amniga dalalka Gobolka sida Somalia, Itoobiya iyo Suudaan, waxaana la filayaa in Mareykanka ku dhawaaqo taageeradiisa ee ku aadan doorashada Kenya ka dhaceysa sanadka soo socda ee 2022.
Dowladda Mareykanka iyo Kenya ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir diblomaasiyadeed, waxaana Mareykanka uu Saldhig weyn oo Milateri ku leeyahay dalkaas, lagana maamulo howlgallada cirka ee lagula dagaalamayo Al-shabaab.
Dowlada Maraykanka ayaa laga yabaa in ay Kenya u xilsaarto inay wakiil uga noqoto arimaha dalka Soomaaliya, gaar haan xiligaan kala guurka ah.